Slit Seal ပါသော အိတ်မျိုးစုံ ဆိုတာဘာလဲ။ ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ ဖြန့်ချိသူနှင့်စက်ရုံမှအကောင်းဆုံး Slit Seal ပါသော အိတ်မျိုးစုံ မှအကောင်းဆုံးကိုရှာဖွေရန်
ပုံစံ - SHG Series
unwinder ကို EPC နှင့် auto တို့ဖြင့် ပေါင်းစပ်ထားသည်။-တင်းမာမှုထိန်းချုပ်မှုစနစ်.
အောက်ခြေတံဆိပ်အိတ်ကို အပူအလျားလိုက် တံဆိပ်ခတ်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်ဖြင့် ပေါင်းစပ်ထားသည်။,သေးငယ်သော အိတ်အကြီးများကို အလွယ်တကူ ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။.
တစ်ခုတည်းသောထည်းသခင်လိပ်,မျိုးစုံထုတ်လုပ်နိုင်သည်။-အကျယ်အဝန်း သေးငယ်သော အိတ်များ.
အလျားလိုက် အလျားလိုက်ပြောင်းခြင်းသည် လွယ်ကူမြန်ဆန်သည်။.
ပူသောအညှပ်ဖြင့် အိတ်များ၏ အကျယ်အဝန်းအမျိုးမျိုးကို တစ်ပြိုင်နက် ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။.
အစုံထည့်ပြီးနောက်-လမ်းသွားပြန်ရစ်စက်,၎င်းသည် လိပ်ပေါ်တွင် စဉ်ဆက်မပြတ် perforate ထုတ်ကုန်များကို ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။. (ရွေးချယ်ခွင့်)
Punching Unit တပ်ဆင်ထားနိုင်ပါတယ်။. (ရွေးချယ်ခွင့်)
မော်ဒယ် အိတ်အရွယ်အစား(မီလီမီတာ) စွမ်းရည်
ရုပ်ရှင်(မီလီမီတာ) Jumbo Roll
လိုင်း အကျယ်(မီလီမီတာ) အရှည်(မီလီမီတာ)
SHG-500-5 1 50~450 50~1010 30~120 0.03~0.15 200~440 AC 1HP 4P&ဂီယာ ၁၅:1
SHG-800-7 1 50~750 50~1010 30~120 0.03~0.15 200~740 AC 1HP 4P&ဂီယာ ၁၅:1
SHG-1000-8 1 50~900 50~1010 30~120 0.03~0.15 200~940 AC 1HP 4P&ဂီယာ ၁၅:1
SHG-1200-10 1 50~1100 50~1010 30~120 0.03~0.15 200~1140 AC 1HP 4P&ဂီယာ ၁၅:1
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.carrybagmachine.com/my/multi-bag-machine-with-slit-seal.html
SHENG-FON PLASTIC MACHINE CO., LTD. ကြေးစားတစ်ခုဖြစ်တယ် Slit Seal ပါသော အိတ်မျိုးစုံ နှစ်ကျော်အတွေ့အကြုံနှင့်အတူထုတ်လုပ်သူများနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း Taiwan။ မည်သည့်အရေအတွက်ကကြိုဆိုနေပါတယ်။ ရန်လိုအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အတူကျွန်တော်အမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူစျေးတွင်နောက်ဆုံးပေါ်ပစ္စည်းများကိုဆက်ကပ်နိုင်ပါသည်။ ငါတို့သည်လည်း OEM, နှစ်ဖွဲ့အမိန့်ကိုလက်မခံ။ ခိုင်နောက်ခံအရောင်ဒီဇိုင်နာနှင့်ထုတ်လုပ်ခြင်းစက်ရုံနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်ကွဲပြားခြားနား BRAND ဖောက်သည်များအတွက်ထုတ်လုပ်ပေးသည်။ သင်ကြိုးစားဆိုတာနဲ့ခင်ဗျားကျိန်းသေကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုစိတ်ကျေနပ်မှုရလိမ့်မည်။
အကောင်းဆုံး Slit Seal ပါသော အိတ်မျိုးစုံ ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက်သင်သည် Slit Seal ပါသော အိတ်မျိုးစုံ မှထုတ်လုပ်သော၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ရုံ